Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRia 43
Ngaphakathi kwendlu uya kufumana igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngeLCD, isitovu kunye neoveni, imicrowave, ifriji, itoaster, umatshini wokuhlamba, izinto zasekhitshini, ilinen yokulala kunye neetawuli. Inomthamo wabantu aba-4: 2 kwigumbi lokulala kunye ne-2 kwigumbi lokuhlala, ukuguqula i-sofa ibe yibhedi.
4.68 ·Izimvo eziyi-47
4.68 · Izimvo eziyi-47
Ngaphandle indlu usondele kakhulu emarikeni eqhelekileyo iintlanzi apho, ukongeza emarikeni, ungatyelela zokutyela ezibalaseleyo, cafes kunye neevenkile ezincinane ngexesha lasemini, kwakunye imivalo kwi Ngokuhlwa, ivuyela umculo, liyaphila, ukutya umgangatho kunye newayini.
Unokukhetha ukuhamba ezitratweni zesixeko, usebenzisa izakhiwo zembali ze-Aveiro, iindawo zokugcina ityuwa yendalo, apho unokuthatha ithuba lokubukela iintaka, iivenkile kunye neefektri zeelekese zesintu, okanye ukhwele ibhayisekile yakho. Thatha ithuba lendawo esembindini yeflethi, wenze kwaye uzive unamava akho ngokungathi usekhaya.
Umbuki zindwendwe ngu- Ria 43
Inombolo yomthetho: 103624/AL